Isbitaalka Henan Cancer - Shenzhen Doneax Science and Technology CO., LTD
Isbitaalka Henan Cancer Hospital
Isbitaalka Henan Cancer Hospital waa isbitaal buro gaar ah leh, iyo sidoo kale isbitaal heerka koowaad ah oo darajada 3aad ah. Wuxuu isku daraa daaweynta, kahortaga, cilmi baarista sayniska, barida, iyo dhaqan celinta.
Waqtigan xaadirka ah, hadda waxaa jira 2,991 sariirood, 36 waaxyo teknoolojiyad caafimaad, iyo in ka badan 3,360 shaqaale, oo 570 ka mid ah ay leeyihiin cinwaanno sare oo xirfadlayaal ah, iyo 960 ay haystaan ​​dhakhaatiir iyo shahaadada mastarka, 105 qof waa dhakhaatiir iyo kormeerayaal mastar oo ka tirsan Jaamacadda Zhengzhou. Intaa waxaa dheer, waxaa jira 34 khabiir oo ku raaxeysanaya gunnooyin gaar ah Golaha Gobolka, iyo sidoo kale khubaro heer sare ah oo hoos timaad maamulka gobolka, iyo hoggaamiyeyaasha tacliinta iyo farsamada ee gobolka.
40-kii sano ee la soo dhaafay, 4 takhasus gaar ah oo heer qaran ah iyo 21 takhasus dawladeed oo muhiim ah (beero) ayaa la aasaasay. Xarunta Kansarka ee Henan, Machadka Cilmi-baarista Burooyinka Gobolka, Ururka Ka-hortagga Kansarka Gobolka, Xafiiska Gobolka ee Ka-hortagga iyo Daaweynta Kansarka, Machadka Caafimaadka ee Gobolka iyo hay'adaha kale ee ka hortagga kansarka iyo hay'adaha cilmi-baarista ayaa dhammaantood halkan lagu aasaasay. Isla mar ahaantaana, 19 cilmi-baaris heer-gobol ah, baaritaanno iyo xarumo lagu xakameeyo tayada, oo ay ku jiraan Xarunta Cilladda Baadhista Baadhista iyo Xarunta Xakamaynta Tayada Daaweynta iyo Xarunta La-talinta Cudurka Tumor-Goboleedka, ayaa sidoo kale halkan lagu aasaasay.